Crypto Abafikisayo - Blockchain News
cryptocurrencies Athandwa, lifikelele ezikalini ezinjalo, ukuba yokucima kuphela lazy kakhulu okanye balumke kakhulu kule nkalo iqela. Kubonakala ukuba nesibindi nokuzingisa iboniswa kuphela abarhwebi kunye nabatyali-ngamashumi eminyaka yamava ukuthengisela zingxoxo, kodwa ngu elivisayo zesiqhelo.
abantwana Modern ababezalelwe yobudala yedijithali, ukuba singqongwe zonke iintlobo gadgets ukususela ebuntwaneni, yaye baqalise yokunxibelelana ngeekhompyutha phambi kwizizukulwana zangaphambili. Esemncinane, babe namathuba zonxibelelwano yokuba azizange esiphupha ngabo kwizizukulwana zangaphambili. ngoko ke, abameli besizukulwana Z baqeqeshiwe ngokukhawuleza kwaye uzive eziphilayo ehlabathini ubuchwepheshe bale mihla.
erik Finman, omnye wabantu abatsha abaninzi nempumelelo entsimini cryptocurrency, kwi 12 iminyaka wavakalelwa amathemba bitcoin. Kuba 6 iminyaka, wayisondeza isimo sakhe zedijithali 400 bitcoins uyinqaba, leyo ngaphezu 4 million dollar elingana kwi zinga. Kwaye konke kwaqala ngo 2011 nge $ 1000 egcinwe kwi dinners lokuzalwa inikeza. Bitcoin wabe ixabisa $ 12.
by 2013, bitcoin esekhulile kakhulu ukuba iiasethi wathengisa ngayo uEric yayanele ukuba ukuqalisa inkonzo ukukhangela wootitshala Botangle, apho naye kamva wathengiswa bitcoins. I young crypto-ungumzondeleli akayi ukuba ayeke khona, ngokombono wakhe, bitcoin azigcina isibheno mali, kunye nexabiso layo singakhula izigidi zeerandi. Le ngusozigidi young ikholelwa ukuba inkqubo yemfundo mihla lwakudala, kunye YouTube kunye Wikipedia ingasifundisa kakhulu. Wada baphikisana nabazali bakhe ukuba akayi ukuya eyunivesithi ukuba akwazi ukuziphilisa izigidi zeerandi phambi ndala. Akukho fundo olubi isizukulwana lwangoku?
Kanjalo, Eric Finman ayikho umzekelo kuphela elivisayo ukubo- cryptocurrencies. eyayiza “imbangi” i Eddy Zillan, ngubani kuqala waba nomdla kubantu crypto-active xa eneminyaka 15. Yinto mncinane kakhulu ukuqala i akhawunti Coinbase, kodwa Eddy akazange ayeke kwaye wafumana indlela emhlabeni imithetho site. Into yokuqala awayenzayo ukuthenga Ethereum for $ 100. Kubalulekile ukuphawula ukuba amakhulu Blogger kunye namaphephancwadi ngoko kwakungekho, kungekho namnye unako ukufundisa ukwenza indlela efanelekileyo. Ngaphandle kwale nto, lo mfana wathola yokuqala $ 10 ezimbalwa iiyure. Oku nakanjani ashaye, ngenxa 10% kwiiyure ezimbalwa – ukukhula kakhulu. Kamva ke satyala malunga $ 12 amawaka kule crypt. Ngokuba ngomnyaka wakhula $ 350 amawaka. Ngoku Zillan is 18 iminyaka ubudala, enakho ipotifoliyo exabisa ngaphezulu kwama $ 1 million kwaye usebenza Consulting yakhe kwayena Cryptocurrency Financial.
enye “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-unyaka, njengokhozo ifomu 6 wakwazi ukubhala malunga Bitcoin iyonke incwadi, apho wabonakalisa umbono wakhe undoqo cryptocurrency kunye blockchain. Incwadi, mhlawumbi ingcali omncinane kwi kryptovlyutam Unga zingathengwa kwi Amazon. inzuzo, kanjalo, senzelwa eyona abantwana, leyo, kunjalo, imke ukufaneleka. Andrew ngokwayo, ngokutsho kwakhe, elingene 0.02 bitcoins.
Kukho young crypto-midlalo kunye “ababi”. ke, i Bitcoin Platinum, abaninzi ezilahlekisayo, yaphehlelelwa yi ubugebengu mthetho ongumntwana. kunjalo, uluntu wahlawula ingqalelo kuyo kwixesha, kwaye kwafuneka avume ukuya mpatho yeprojekthi. Ngokutsho kwakhe, wahlela kuqokelela kuphela $ 5,000.
Kuyacaca, kwixesha elizayo imfuno abaziingcali kwicandelo loqoqosho lwamasuntswana kukhula kuphela. Kunye nesiphakamiso, bonke akhawunti, akayi barhuqe emva kwenye.
Yahoo iquka BTC t ...